Saddex Sannadood Ka Hor Dhamaadka Qandaraaskiisa, Joe Gomez Oo Qalinka U Qaadanaya Heshiis Uu Mustaqbalkiisa Oo Dhan Ugu Hibaynayo Liverpool – Cadalool.com
Saddex Sannadood Ka Hor Dhamaadka Qandaraaskiisa, Joe Gomez Oo Qalinka U Qaadanaya Heshiis Uu Mustaqbalkiisa Oo Dhan Ugu Hibaynayo Liverpool
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa heshiis cusub ku abaalmarin doonto difaaceeda reer England ee Joe Gomez, kaas oo qandaraaskiisii hore ay ka hadhsan tahay muddo saddex sannadood ah.
Ciyaartoygan da’da yar oo ay Liverpool u aragto inuu yahay mustaqbalka kooxda ayaa loo soo bandhigi doonaa heshiis cusub oo horumar waqtiga iyo lacagtaba loo kordhin doono, waxaana labada dhinac u socda wada-xaajoodyo lagu soo afjari doono bilo gudahood haddii aanay toddobaadyo noqonin.
21 jirkan ayaa uu doonayaa tababare Klopp inuu qayb ka ahaado ciyaartooyada da’da yar ee uu mustaqbalka Liverpool usii diyaarinayo, waxaana isagoo shir jaraa’id ka hadlayey uu Klopp xusay in Anfield uu mustaqbal weyn ku leeyahay.
“Gomez, mustaqbal weyn ayaa u yaalla Liverpool shakina kuma jiro. Joe waa ciyaartoy muhiim ka ah kooxda, in aanu aragno heshiis cusub oo uu saxeexayna way fiican tahay.” Sidaas ayuu yidhi tababare Jurgen Klopp oo dhinaca kale tibaaxay inuu Gomez caafimaad qabo, kalsooni badan haysto isla markaana uu ku wargeliyey sida uu kooxdiisa iyo qorshihiisa muhiimka ugu yahay.
Kopp waxa uu qiray in ka hor intii aanu Liverpool imanin aanu aqoon wanaagsan u lahayn, laakiin isla markii uu garoonka Anfield soo gaadhay looga sheekeeyey qofka uu yahaye Gomez, waxaanu yidhi: “Waan garanayey laakiin aqoon fiican uma lahayn. Qof walba wuxuu ii sheegay sida uu u wanaagsan yahay markii uu yimid Liverpool, kaddib wuu dhaawacmay waanu soo dagaallamay. Waxaan xasuustaa markii aan imid in qof walba uu Gomez iiga sheekeeyey.”
Gomez ayaa degganaan iyo kalsooni badan ku ciyaaray kulamadii uu saftay xili ciyaareedkan oo inta badan ay iska garab ciyaareen Virgil van Dijk oo markay is garab taagan yihiin uu khadka dambe ee dhibaatadu ka haysatay Liverpool noqday mid xasiloon oo aan dhayal gool lagaga dhalin karin, waxaana uu kursiga kaydka u diray Lovren.